Ihe omuma nke oma 5 Ihe omuma nke mebiri emebi
Ọ bụ ezie na omume SEO na-akwalite nyocha onwe onye na nzụlite ọchụchọ, ịga-eju ụfọdụ nsonaazụ kachasị pụta mgbe ị na-achọ okwu 'SEO'. N'ezie, Google na-akpaghị aka na-adịghị mmaihe na-esote okwu SEO. Nke a na-eduga n'ịghọta na omume a arụpụtawo aha ọjọọ n'ebe ahụ - altalena legno little tikes.
N'ikpeazụ, SEO na-emepụta bọtịnụ nchọgharị ọchụchọ na spiders ka ịnwetaweb-page, kọwaa nzube ya na ihe ọ pụtara ma mechaa depụta ọdịnaya ya maka ndị na-enyocha. Usoro a nke ịhaziibe weebụ na-eme ka ọ dị ngwa ma dị mfe maka ndị na-achọ engine engine na nyocha nke onwe ya ka ọ nwere ike ịmepụta nsonaazụ ọchụchọ dị mkpa makanyocha ọchụchọ.
Artem Abgarian, bụ ọkachamara n'atụmatụ Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-akọwa ebe SEO nwere aha ọjọọ.
1. Ozi Emails na-adịghị asọpụrụ
SEO dị ka ubi ọhụrụ na-eto eto na-adọta ndị edemede na ndị na-amụ ihe. Naachọta maka azụmahịa, ndị a na-ebido kpakpando na-achọ ụlọ ọrụ na ndị nwere mmasị na ọtụtụ ozi-adịghị emetụtaghị ozi-e nke na-eme ka ha banye na igbe mbata hana kwa izu. Ụdị nke ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha bụ ndị ọkachamara na-enye ha dị ka ndị aghụghọ na ndị aghụghọ site na ya na aha ọjọọ ahụahịa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ozi ịntanetị na-ekwe nkwa idozi ọtụtụ nsogbu maka ụlọ ọrụ ndị a na-eche na ha ga-ekwere. Ọ na-emekwa na ụfọdụ n'ime ndị aonwe-akpọ SEO ọkachamara bụ n'ezie scammers.
Isiokwu bụ ntọala nke SEO. Jiri ya nke oma ma weputa ihe ndi choro. Naotu aka ahụ, iji aka ya ma ọ bụ ikwughachi okwu na-emeghị ihe ọbụla iji mee ka nchọpụta ọchụchọ chọpụta ihe dị njọ ma na-ewute ya.nzube nke ikwe SEO. Mkpụrụokwu isiokwu gị maka isiokwu ga-adị nnọọ mma dị ka nke zuru oke iji nweta ogo dị mma ma zere antaramahụhụ sitere na engines ọchụchọ.
3. Uwe ejiji na ụzọ mbata
Usoro mmepụta nke a na-agụnye iji koodu HTML na ọdịnaya makaotu isiokwu na ebumnuche iji chekwaa nhazi na ogo. Ozugbo onye ọrụ clicks na njikọ ma ọ bụ peeji nke, a na-ebute ha gaa na onye ọzọ na-enweghị njikọmkpokọta maka ihe omuma ihe ha na-eji eme ihe maka channeling okporo ụzọ na weebụsaịtị mbu. Usoro ntanetị na ụzọ ụzọ ụzọihe mgbagha ma onye ọrụ na nyocha nke a na - akpata aha ọjọọ.
4. Njikọ ahia
Anyị niile maara ike SEO nwere na e-azụmahịa. Ndị nwe ụlọ ọrụ na SEO ndị ọkachamaraghọta na ọ dị mkpa ijikwa ikike a n'ihi ya, ha na-ebute omume ndị dị ka ịzụta njikọ iji dozie ọkwa na nyocha ọchụchọ. Njikọ ndị ajiri aghụghọ na-agafe engines na-achọpụta site na ịmepụta akwụkwọ na-enweghị isi n'enweghị nchọpụta. Otú ọ dị, iwu ndị dị otú ahụ dị ka Google bụna-ejide omume a ma na-eme ka ndị na-emerụ ahụ na-eme ihe ọjọọ.
5. Ihe Ntanye Zoro ezo na Njikọ
Usoro aghụghọ na nke aghụghọ na-eji ezo ma ọ bụ gosipụta ọdịnaya dị iche iche site na iheonye ọrụ clicks. Enwere ike ịmata dịka ederede n'azụ onyinyo ma ọ bụ ederede ọcha na-acha ọcha. Ezigbo ndi oru SEO bu ndi a ma amaeleghi anya iji usoro a ezie na ọ ka na-adịkarị na denting SEO aha.
Ndị ọrụ niile nwere ahụmahụ ma dozie nsogbu ndị siri ike na-emetụ n'ahụ omume. NaỤlọ ọrụ SEO na-aza ma na-etinye aka n'omume na-enweghị isi.